SADC Political Organ Briefs Regional Ministers on Status of Zimbabwe Unity Talks
Sources told VOA Mr. Guebuza shared with regional ministers the contents of a report on Zimbabwe submitted to him recently by South African President Jacob Zuma, SADC's mediator in the unity government talks
The Southern African Development Community troika or committee on politics, defence and security on Thursday briefed regional foreign ministers meeting in Mozambique on the SADC mediation process in Zimbabwe.
Mozambican President Armando Guebuza, who is currently chairman of the so-called Troika, briefed the ministers on progress made so far in negotiations between President Robert Mugabe's long-ruling ZANU-PF party and the two formations of the former opposition Movement for Democratic Change.
The ministers reportedly compiled a report on the region's hot spots, including Zimbabwe, Madagascar and the Democratic Republic of Congo which they will present to the African Union at a summit later this month in Addis Ababa.
SADC officials said the ministers are pleased the various parties to the unity government in Zimbabwe have resumed negotiations on fully implementing their 2008 power-sharing agreement. They said they believed Zimbabwe was on the right path, as VOA correspondent Scott Stearns reported.
Sources told VOA Mr. Guebuza shared with regional ministers the contents of a report on Zimbabwe submitted to him recently by South African President Jacob Zuma, SADC's mediator in the unity government talks.
Zuma advisor Lindiwe Zulu earlier confirmed that ministers were set to hear from Mr. Guebuza on the developments in Harare where South Africa has been facilitating at the behest of SADC and the African Union.
"South Africa was mandated by the SADC troika, so it's the troika chairman, President Armando Guebuza, or the SADC secretariat who will brief the foreign ministers," she told VOA Studio 7 reporter Ntungamili Nkomo.